Ejipta: Naka ny Pop Corn-ny Ny Farao Lehibe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Jolay 2012 22:25 GMT
Nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo, tsy nankasitrahan'ny Ejipsiana loatra ireo nosafidiany tamin'ny fiodinana farany; nanapa-kevitra ny tsy handray anjara amin'ny fifidianana ny sasany raha nifidy ny kandidà iray noho ny tahotra ilay kandidà hafa kosa maro hafa.
Ankehitriny efa i Mohamed Morsi, kandidàn'ny Mpirahalahy Miozolomana, no lasa filoha [mg], ary na dia resy tamin'ny fifidianana aza i Ahmed Shafiq, izay notohanan'ny Filan-kevitra Faratampon'ny Tafika (SCAF), mbola manana vatom-panorona maro azony ampiasaina ny miaramila [mg].
Tonga tamin'izay nantsoin'ny bilaogin'i Big Pharaoh [Farao Lehibe] hoe “Fifandonan'ny Jiolahim-boto“, tolona eo amin'ny SCAF sy ny Mpirahalahy Miozolomana amin'izay hitana ny fahefana ambony ao Ejipta ny raharaha.
Mifampitolona ny SCAF sy ny MB, fikambanana roa samy jadona [mitari-tokana], “samy mitondra ny adihevitra ho ady ho amina idealy, ara-drariny sy demokrasia ny andaniny sy ny ankilany”
Mandritra izany fotoana izany, ny fahefana mpanao lalàna no fiadiana ifampitoloman'ny roa tonta amin'izao fotoana izao:
Tsy lalaon'antoko roa (MB # SCAF) ny politika ejipsiana: Manana anjara toerana fototra amin'ny vanim-potoana aorian'i nitondran'i Mubarak ny [fahefana] mpanao lalàna
Voatantara tsara kokoa amin'ny maha- ady ‘Mafana’ eo amin'ny #SCAF sy #HCC andaniny ary eo amin'i #Mursi sy #MB ankilany ny toe-draharaha.
Ary ny fanontaniana am-bavan'ny Ejipsiana maro amin'izao fotoana dia hoe, “Tsy Maintsy Miandany Ve Isika?”
Namaly Ny Farao:
Raha naka andaniny tamin'ny MB ho fanoherana ny SCAF ny revolisionera sasany, Izaho kosa nanapa-kevitra haka pop corn dia hijery ilay adin'alika. Eo amin'izay maha-tafiditra ahy amin'ity raharaha ity, tena tahaka nyjiolahimboto miady ny SCAF sy ny MB ary tery eo afovoany ny revolisiona. Tsy misy mihorakoraka momba ny revolisiona ireo jiolahimboto ireo. Nahoana aho no hiandany raha fantatro tsy misy fisalasalana fa hivadika amiko izay mandresy?
Saingy nampiany avy eo izay tokony ataon'ny revolisionera ankoatra ny fijerena ity adim-pahefana tsy mitsahatra ity:
Mila safidy hafa noho ny MB sy ny jeneralin'ny tafika i Ejipta.Tokony hisy safidy fahatelo atolotra ny vahoaka amin'ny fifidianana ho avy. Raha tsy mitsangana io safidy fahatelo, mbola hoandevozin'izay mandresy amin'ny adin'ny MB sy ny SCAF isika
SCAF: Filankevitra Faratampon'ny Tafika
MB: Mpirahalahy Miozolomana
HCC: Fitsarana Avo Momba ny Lala-panorenana